Emoji an'ny olona malaza amin'ny WhatsApp | Famoronana an-tserasera
Emoji an'ny olona malaza amin'ny WhatsApp
Ny mariky ny fankatoavana sy ny lazan'ireo olo-malaza rehetra hatreto dia ny fampiroboroboana ny vokatra sy ny varotra momba ny maha-saribakoly azy. Madonna, Beyoncé na Shakira dia ohatra tsara amin'ny mpihira nanangana ny Barbie azy manokana. Na izany aza, tamin'ny vanim-potoana 2.0, novaina ireo tandindona sy solontena ireo mba ho lasa ampahany amin'ny tontolon'ny nomerika ihany koa. Ny emojis amin'ireo tarehin-tsoratra ireo dia naka ny toeran'ny saribakoly mba ho azon'ny mpankafy faran'izay mafy. Ny hiaka farany amin'ireo emotika ireo dia kintana 40 amin'ny tontolon'ny mozika amin'ny maha-goavambe azy Bowie, Michael Jackson, Madonna, Amy Winehouse na Katy Perry izy rehetra dia novolavolain'ny mpamorona endrika Bruno Leo Ribeiro. Na dia mbola tsy misy aza izy ireo amin'ny WhatsApp, dia nilaza ny mpamorona fa miasa amin'ny fanatsorana azy ireo mba hahafahana mampiditra azy ireo amin'ny fampiharana tsy ho ela.
Tsy isalasalana fa sanganasa mahaliana momba ny synthesis izay tadiavin'ny fanekena eo noho eo ny mpijery ny tsirairay amin'ireo toetra amam-panahy amin'ny endrika mampiavaka ny olo-malaza tsirairay. Raha ny filazany, ny tsirairay amin'ireo endriny ireo dia naharitra ela kokoa noho ny nampoizina, na dia nandroso aza ny tetikasany dia nahazo tombony manokana izy ary nanomboka tamin'ny famolavolana ny iray tamin'izy ireo tao anatin'ny ora maromaro ka nanokana 30 minitra ho azy. Na dia mamarana ny pitsopitsony momba ny endriny aza izy izao, dia efa nanolotra santionany amin'ny tetikasany ary miandry ny hamolavola ilay rindranasa voatondrony ary hanao izay hahafahan'ny emojiis ho azon'ny mpampiasa. Ahoana ny hevitrao momba ny volavolain'izy ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Emoji an'ny olona malaza amin'ny WhatsApp
"Mona Lisa defragged" avy amin'i Tyler Bohm amin'ny akrilika amin'ny hazo sy ny plexiglass